Quizzes Archives - Online Info
ကြည့်လိုက်တာနဲ့ သင့်ကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးသွားစေနိုင်ပြီး ဘာတွေလဲဆိုတဲ့အဖြေကိုသိရဖို့ ခက်ခက်ခဲခဲစဉ်းစားရမယ့်ဓါတ်ပုံများ
February 25, 2022 Bee News 0
ကြည့်လိုက်တာနဲ့ သင့်ကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးသွားစေနိုင်ပြီး ဘာတွေလဲဆိုတဲ့အဖြေကိုသိရဖို့ ခက်ခက်ခဲခဲစဉ်းစားရမယ့်ဓါတ်ပုံများ ပြင်ပလောကမှာ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့ အရာတွေ အများကြီးရှိနေတတ်ပြီး တချို့က သင့်ကိုနည်းနည်းတော့ စိတ်ရှုပ်စေနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်လုံးများသည် ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့တွင် ထူးဆန်းပြီး အမှန်တကယ်မဟုတ်သည့်အရာတစ်ခု ဖြစ်ပျက်နေသည်ဟု မျက်လုံးများက ဦးနှောကိုဆက်တိုက်သတင်းပို့နေပြီးး၊ အဖြေတစ်ခုရှာရန်အတွက်တော့ ဦးနှောက်က အကြေအလည်စဉ်းစားနေတတ်ကြပါတယ်။ ပြသနာတိုင်းရဲ့ တစ်နေရာရာမှာတော့ အဖြေရှိနိုင်ပါတယ်။ယခုတစ်ခါမှာတော့ […]
ပုံတွေကိုကြည့်ပြီး သင့်မျက်စိဘယ်လောက်လျင်သလဲ ဆိုတာစမ်းကြည့်လိုက်ရအောင်
January 10, 2022 Bee News 0
တစ်ခါတစ်လေမှာ ကျနော်တို့ဟာ အမြင်မှားတတ်တာတွေကြုံဖူးကြမှာပါ။ မည်မျှပင် သတိရှိပါသည် ဆိုစေဦးတော့ တစ်ခါတစ်လေတော့ မှားတတ်ကြပါတယ်။ ဥပမာ ပစ္စည်းတစ်ခုကိုရှာပြီဆိုပါတော့ မိမိမျက်စိနားတွင်ပင်ရှိသော ပစ္စည်းတစ်ခုဟာ မျက်စိလျမ်းပြီးမမြင်တတ်တာမျိုးလဲရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ ပုံလေးတွေမှ လျို့ဝှက်ချက်များကိုရှာဖွေပြီး စာဖတ်သူရဲ့ အမြင်အာရုံ နဲ့မျက်စိဘယ်လောက်လျင်လဲဆိုတာကို စမ်းသပ်လိုက်ပါခင်ဗျ။မိမိတွေ့ရှိတဲ့ အဖြေမှန်ကို ကွန့်မန့်မှာမန့်ခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်။ ၁။ငှက်ပျောသီးတွေကြားထဲမှ မြွေကိုရှာပါ။ ၂။ […]
သင့်ရဲ့ သင်္ချာစွမ်းရည်ကိုစမ်းသပ်မယ့် ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိ‌များ
September 10, 2021 Bee News 0
သင်္ချာကိန်းဂဏန်းပုဒ်စာများဟာ ပထမ မြင်လိုက်တာနဲ့ စိတ်ရူပ်စရာကောင်းလှပါတယ်။သို့ပေမဲ့ ခက်ခဲတဲ့ ပုဒ်စာတွေနောက်မှာ စူးစမ်းရှာဖွေနိုင်ခြင်း ၊ အံဩဖွယ်ပျော်ရွှင်မှုများကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ဂဏန်းသင်္ချာပုဒ်စာ များဟာ သင်ရဲ့ သိမြင်မှုစွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်နိုင်ပြီးသင်ရဲ့ဝေဖန်ပိုင်းခြားတွေးခေါ်မှုကိုထက်မြက်စေနိုင်ပါတယ်။သင့်ရဲ့ အားလပ်ချိန်၌ အိမ်မှာ ဖြေရှင်းဖို့ သင်္ချာပုဒ်စာများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁)ဒီဗုစ္ဆာရဲ့ ဖြေကဘယ်လာက်လဲ? (၂)N ရဲ့တန်ဖိုးကိုရှာကြည့်ပါ။ (၃)ပေါင်း ၊ နုတ် […]
August 17, 2021 Bee News 0
မျက်စိအားကောင်းခြင်းကို ဘယ်သူမှသိပ်ကြွားလေ့မရှိပါဘူး တစ်ခါတလေတွင် ကျွန်တော်တို့ ရှာနေတဲ့အရာဟာ ကျွန်တော်တို့ ရှေ့မှာရှိနေတာ မှန်ပင်ပဲ မမြင်တာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။အထူးသဖြင့် အရာ၀တ္ထု တစ်ခုခု သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကောင်ဟာ သူ့ရဲ့နောက်ခံ ပတ်၀န်းကျင်နှင့် ရောထွေးနေလျှင် သင့်မျက်စိရှေ့မှာရှိနေလည်း ပျောက်နေတတ်ကြပါတယ်။အဖြေတွေကိုအောက်ဘက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ (၁)ဒီပုံထဲမှာ ခွေးကိုရှာကြည့်ပါ။ (၂)ဒီပုံထဲ‌ကကြောင်ကိုရော သင်ရှာကြည့်ပါ။ (၃)ဒီထဲမှာ လက်စွပ်လေးကိုသတိထားမိလား။ (၄)ကြောင်လေးကိုရှာကြည့်ပါ။ […]
July 28, 2021 Bee News 0
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းထဲမှာမျက်လုံးဟာအရေးကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သလိုအမြင်အာရုံဟာလည်းအရေးပါလှတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ကျွန်တော်တို့အမြင်အာရုံတွေအမြဲတမ်းကောင်းမွန်နေစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးကိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ယနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်စမ်းမေးခွန်းလေးကိုကူရှာကြည့်ပြီးမျက်လုံးကိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ကြရအောင်။(အဖြေများကိုတော့အောက်ဘက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်) (၁)မျောက်တစ်ကောင်ကိုရှာကြည့်ပါ။ (၂)ဆင်တစ်ကောင်ကိုတွေ့မိသလား? (၃)ကြက်တစ်ကောင်ကိုရှာကြည့်ပါ။ (၄)ဝက်တံတစ်ကောင်ကိုရှာကြည့်ပါ။ (၅)တစ်ကိုယ်လုံးမဲနေတဲ့ပျားတစ်ကောင်ဘယ်နားမှာလဲ? (၆)ပုတ်သင်ညိုတွေရဲ့ကြားထဲကမိချောင်းတစ်ကောင်ကိုရှာကြည့်ပါ။ (၇)ကြောင်လေးတစ်ကောင်ဘယ်နားမှာရှိနေလဲ? (၈)ရှဉ့်တစ်ကောင်ကိုရှာကြည့်ပါ။ (၉)ဖားပြုတ်တစ်ကောင်ကိုရှာကြည့်ပါ။ (၁၀)မြင်းကျားတစ်ကောင်ဟာဒီထဲမှာပုန်းနေပါတယ်။ (၁) (၂) (၃) (၄) (၅) (၆) (၇) (၈) (၉) (၁၀)
June 7, 2021 Bee News 0
ယခုဆောင်းပါးမှာဖော်ပြပေးမယ့်ဉာဏ်စမ်းလေးတွေဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ မှတ်ဉာဏ်မှတ်သားနိုင်စမ်းကို မြှင့်တင်ရန် နှင့် သင်ယူနိုင်တဲ့စိတ်ကို ဖွင့်ထားခြင်းဖြစ်တဲ့ Ikedaနည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဖြေကိုအောက်ဘက်မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ (၁)ဒီအပုံမှာကွဲပြားနေတဲ့အချက်၈ချက်ကိုရှာကြည့်ပါ။ (၂)ခွေးအရုပ်တွေကြားထဲမှကြောင်အရုပ်တစ်ခုကိုရှာကြည့်ပါ။ (၃)ဒီအပုံထဲမှာဘာတွေမှားနေလဲ။ (၄)ဒီအပုံကအတန်းလေးတွေဟာ တွားသွားသတ္တဝါ၊နို့တိုက်သတ္တဝါ၊ကုန်းနေရေနေစသည်ဖြင့်ခွဲထားပြီးအမျိုးအစားမတူတဲ့တိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုရှာကြည့်ပါ။ (၅)အောက်ကအပုံထဲမှ အသီးနဲ့အရွက်ကိုသီးသန့်ဆီခွဲကြည့်ပါ။ (၆)အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ ဝါကျတစ်ခုဖြစ်အောက် ကွက်လပ်ထဲကစာလုံးတွေကိုဖြေကြည့်ပါ။ (၇)ရုပ်ပြအပုံလေးတွေကိုကြည့်ပြီး ဘယ်နိုင်ငံတွေဖြစ်မလဲဆိုတာခန့်မှန်းကြည့်ပါ။ (၈)အောက်ဖော်ပြပါပုံကိုသင်စိတ်၌ မှတ်သားပုံဖော်ပြီးနောက်၎င်းကိုနောက်တစ်ကြိမ်မကြည့်ဘဲစာရွက်အလွတ်သို့မဟုတ်ဂရပ်စက္ကူတစ်ရွက်ပေါ်တွင် ပြန်ဆွဲဖို့ကြိုစားကြည့်ပါ။ အဖြေများ (၁) […]
March 14, 2021 Bee News 0
လူတိုင်းဟာမျက်စိလျင်ပါတယ်လို့အတိအကျပြောလို့မရပါဘူး။ လူအများစုဟာသူတို့နှစ်သက်တဲ့ ဇာတ်ကား (သို့မဟုတ်) အရာတခုခုတွင် အာရုံရောက်နေပါက ဘေးနားတွင် ဆင်တစ်ကောင် လာထိုင်နေတာတောင် သတိမပြုမိတတ်ကြပါဘူး။ဒီဆောင်းပါးလေးထဲမှာတော့သင့်အနေနဲ့အာရုံစိုက်နေတာတောင်ဒီအရာတွေကိုရှာဖွေနိုင်ပါ့မလားဆိုတာကိုစမ်းသပ်ကြည့်လိုက်ပါ။အဖြေများကိုအောက်ဘက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ (၁)သရဖူမဆောင်းထားတဲ့ငန်းတစ်ကောင်ကိုရှာပါ။ (၂)ဒီငှက်တွေကြားထဲမှာရှိနေတဲ့လိပ်ပြာတစ်ကောင်ကိုရှာကြည့်ပါ။ (၃)ဂျယ်လီငါးနဲ့ငါးတွေကြားထဲမှာရှိနေတဲ့ခရုတစ်ကောင်ကိုရှာကြည့်ပါ။ (၄)ပင်ဂွင်းတွေကြားထဲမှာရှိတဲ့ပန်ဒါတစ်ကောင်ကိုရှာကြည့်ပါ။ (၅)ပြုံးနေတဲ့ဒီရှာစောင်းပင်တွေကြားထဲကငိုနေတဲ့ရှားစောင်းပင်လေးကိုရှာကြည့်ပါ။ (၆)အသည်းပုံမျက်လုံးလေးပါးတဲ့ထောပတ်သီးကိုရှာကြည့်ပါ။ (၇)နှာရွက်ပါတဲ့ကြောင်လေးတစ်ကောင်ကိုရှာကြည့်ပါ။ (၈)မတူညီတဲ့နားရွက်ပါရှိတဲ့ရက်ကွန်းတစ်ကောင်ကိုရှာကြည့်ပါ။ (၉)ပျားတွေထဲမှ လှပသေးငယ်တဲ့ပိုးဖလံလေးတစ်ကောင်ကိုရှာပါ။ (၁၀)ဖရဲသီးတွေကြားထဲမှ စတော်ဘယ်ရီသီးတစ်လုံးကိုရှာကြည့်ပါ။ (၁၁)ဒီထဲမှာတော့ငါးလေးတစ်ကောင်ပုန်းနေပါတယ်ရှာကြည့်လိုက်ကြပါဦး။ (၁၂)အရွက်များကြားထဲရှိ ကြက်တူရွေးကိုရှာကြည့်ပါ။ […]
March 9, 2021 Bee News 0
ခုဓာတ်ပုံတွေကတော့ ပုန်းကွယ်နေတဲ့အရာကို ရှာရတာ နှစ်သက်သူတွေအတွက် အာရုံပိုစိုက်စေမှာပါ။ သေးငယ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကို ရှာနိုင်တဲ့ ရေဒါလိုသူမျိုးတွေ အတွက် အမြင်အာရုံကိုလေ့ကျင့်ရန် လျို့ဝှက်ထားတဲ့အရာများကို အချိန်အနည်းငယ်အတွင်း ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ဖို့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။အဖြေတွေကိုအောက်ဘက်မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ (၁)အသည်းပုံသဏ္ဌာန်အစေ့ရှိသောထောပတ်သီးကိုရှာကြည့်ပါ။ (၂)ဒီဓာတ်ပုံထဲမှာပုန်းနေသော ဖားတစ်ကောင်ကိုရှာကြည့်ပါ။ (၃)ပင်လယ်ရေညှိကြားတွင် ပုန်းနေသော jellyfish ကိုရှာကြည့်ပါ။ (၄)ထိုဂျပန်မီးပုံးတွေကြားထဲက မီးသီးအနီရောင်တစ်လုံးကိုရှာပါ။ (၅)ယုန်တွေကြားထဲမှ ပုန်းနေ‌သော […]
January 13, 2021 Bee News 0
ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကအရာတွေကိုမြင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မျက်စိဟာ အရာဝတ္ထုတွေဆီကလာတဲ့ အလင်းနဲ့ ပုံစံကိုဖမ်းယူကာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦးနှောက်ထံသို့လျှပ်စစ် အချက်ပြမှုတစ်ခုအနေနဲ့ ပို့ဆောင်ကာပုံရိပ်ဟာ ဘယ်လိုပုံသဏ္ဍာန်ရှိသလဲဆိုတာကိုပုံဖော်ပေးပါတယ်။ယခုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြပေးပေမယ့်ပုံရိပ်လေးတွေဟာ သင့်ရဲ့မျက်လုံးမြင်နိုင်စွမ်းကိုလေ့ကျင့်နိုင်ဖို့အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။သင့်အနေနဲ့ဖော်ပြထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာဖွက်ထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုရှာဖွေနိုင်မလားဆိုတာကိုအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အရာတွေကိုကြည့်ရှုကာဖြေဆိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်။(အဖြေတွေကိုတော့အောက်ဘက်မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်) (၁) ဒီဓာတ်ပုံလေးထဲမှာတော့ ဖွက်ထားတဲ့ ရေဘူးလေးတစ်ဘူးရှိပါတယ်။ ရှာကြည့်လိုက်ကြပါဦး။ (၂) ဒီမျောက်နှစ်ကောင်ရဲ့ ဓာတ်ပုံထဲမှာတော့ အလေးမ weight တုံးလေးနှစ်တုံးကို ဖွက်ထားပါတယ်။ (၃) ဒီဓာတ်ပုံလေးထဲမှာတော့ […]
သင့်ရဲ့ဦးနှောက်ကို လှည့်စားစေနိုင်သည့် နက်နဲသော ပဟေဠိများ
January 12, 2021 Bee News 0
လူကြိုက်အများဆုံးနှင့် စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံး သော နက်နဲသည့် ပဟေဠိ နံပါတ်များနှင့် ရုပ်ပုံများဟာ အခြေခံကျကျ တွက်ချက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီပဟေဠိများဟာ အသက်အရွယ်မရွေးစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အာရုံစူးစိုက်မူသာမက တွေးခေါ်နိုင်စမ်းကိုပါ စစ်ဆေးပေးနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။(အဖြေများကိုတော့အောက်ဆုံးမှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်) (၁) ဒီပဟေဠိရဲ့ နောက်ဆုံးရလဒ်ကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ? အဖြေက ၁၅ပါ ။ (၂)ပေးထားတဲ့?နေရာမှာ ဘယ်နံပါတ်ထည့်ရမှာလဲ။ အဖြေက ၆ပါ (၅၇၄၉၈၂၇+၃၈၆၄၇၅၉) […]